Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 2)
Sida laga soo xigtay Kuo, taxanaha Apple Watch 7 wuxuu matali doonaa isbadal aad u weyn xagga naqshadeynta waxaana la bilaabi doonaa bishan.
Kadib xanta dib -u -dhaca, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inaan awoodi doonno inaan iibsano taxanaha cusub ee Apple Watch 7 bisha Sebtember.
In kasta oo uu suuqa joogay 7 sano, Apple Pay wuxuu ku leeyahay saamiga isticmaalka aad u hooseeya dadka isticmaala iPhone.
Madasha muusigga ee qulqulka Google YouTube Music ayaa gaadhay 50 milyan oo isticmaale bille ah.
Waqtigan xaadirka ah Xiaomi waxay iibisaa saacado ka sii caqli badan kuwa Apple
Qeybtii labaad ee sanadka, Xiaomi waxay iibisay unugyo badan oo ah saacado iyo jijimooyin caqli badan marka loo eego Apple.
Muraayadaha dhabta ah ee Apple oo mar walba ku xiran iPhone
Muraayadaha dhabta ah ee Apple waxay daruuri u baahnaan doontaa isku xirka iPhone -ka hawlgalkooda
Apple waxay la wareegtay xuquuqda dokumentariga 'Dagaalka ka hor Christmas -ka'
Dagaal adag oo loogu talagalay munaasabad ballaaran oo Kirismas ah. Tani waa waxa ay noogu sheegaan Dagaalkii Kahor Kirismaska, documentary -ga Apple TV + ee xiga
Waxay umuuqataa in taxanaha Apple Watch 7 uu waxoogaa kordhin doono qaraarkiisa
Sida laga soo xigtay warbaahinta caanka ah ee Bloomberg, qaabka cusub ee Apple Watch Series 7 wuxuu ku dari doonaa 16% shaashad ka badan taxanaha hadda jira ee 6
Taxanaha Apple Watch 7 wuxuu u eg yahay inuusan la jaan qaadi doonin xargaha hadda jira
Wararka xanta ah ee ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in xargaha hadda ee Apple Watch uusan la jaan qaadi doonin Taxanaha 7
Xiriirinta tooska ah ee barnaamijyada si looga fogaado guddiyada Dukaanka App -ka ayaa loo oggol yahay xaaladaha qaarkood
Apple waxay beddeli doontaa qawaaniinta si loogu oggolaado ku -daridda xiriir toos ah barnaamijyada qaarkood laga bilaabo 2022 -ka soo socda
Eve Smart Radiator Thermostat Thermostat oo Casriyeyn Lagu Sameeyo Iyada oo la Taageerayo Dunta
Xaawa waxay ku darsataa taakuleynta heerkulbeeyayaasha hiitarka. Hal talaabo oo kale oo ah fulintiisa arrimaha
Ka dib markii loo beddelay moodeelka khadka tooska ah sababtuna tahay masiibada COVID, Apple wuxuu badbaadiyaa fadhiyada fool-ka-foolka ah ee Maanta ee Apple ee Yurub.
11/XNUMX: sidan ayuu Aqalka Cad ku noolaa, oo hadda laga heli karaa Apple TV +
Apple iyo BBC waxay bilaabeen documentary cusub oo la xiriira wixii dhacay Sebtember 11, 2001. 11/XNUMX: Sidan ayuu Aqalka Cad u noolaa
Gurman waa u suurtoobi weyday Apple Watch Series 7 inuu qaado dareeraha cadaadiska dhiigga
Gurman wuxuu si adag u xaqiijinayaa in taxanaha cusub ee Apple Watch 7 uusan yeelan doonin dareeraha cadaadiska dhiigga
Ethan Hawke iyo Ewan McGregor ayaa u duubi doona Raymond iyo Ray Apple TV +
Raymand iyo Ray waa filim cusub oo Apple iibsatay xuquuqda sii deynta filimka Apple TV +
Soosaarka Apple Watch Series 7 wuxuu leeyahay arrimo tayo leh
Marka loo eego macluumaadka ka imanaya khadka isku -xidhka, taxanaha Apple Watch 7 wuxuu qabaa dhibaatooyin xagga tayada ah oo hoos u dhigi doona bilaabitaankiisa.
Apple wuxuu sii daayay Raadiyaha Apple TV + Documentary 'The Velvet Underground'
Apple waxay filaysaa horudhaca (Oktoobar 15) ee dokumenteriga ku saabsan The Velvet Underground iyagoo sii deynaya trailer -ka YouTube -ka.
Sidoo kale waa teendhooyinka taxanaha Apple Watch Series 7 ee horeyba looga iibiyay Shiinaha
Weli waxaa jira toddobaadyo illaa bilawga taxanaha Apple Watch 7. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira durba dhowr teleefoon oo horayba looga iibiyay Shiinaha.
Telegram wuxuu gaadhay tirada hal bilyan oo la soo dejisto
Telegram wuxuu gaadhay tirada hal bilyan oo la soo degsado dalabka adduunka oo dhan
Apple Watch Series 7: Naqshad Cusub, Taariikhda Siideynta, iyo Tilmaamaha
Dhammaan wararka ku saabsan taxanaha cusub ee Apple Watch 7: naqshadeynta, qeexitaannada, qiimaha iyo taariikhda siideynta.
Apple waxay iibsataa adeegga muusikada ee Primephonic si loogu dhex daro Apple Music
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa ku dhawaaqday iibsiga madal muusigga qadiimiga ah ee Primephonic
Codka maqalka ee Apple wuxuu yimaadaa Clubhouse
Codsiga Clubhouse wuxuu siiyaa isticmaaleyaashiisa ikhtiyaarka maqalka -bannaan si ay u dhegeystaan ​​wadahadalada si kale oo dhab ah
Xilliga ugu horreeya ee Guriga Kahor Mugdiga, waxaa bilaash looga heli karaa Apple TV +
Wakhti xaddidan, Apple waxay u oggolaanaysaa qof kasta inuu si bilaash ah u daawado dhammaan xilligii ugu horreeyey ee Guriga Kahor Mugdi.
Taxanaha Apple Watch 7 wuxuu keeni doonaa dials cusub oo ku habboon shaashadiisa cusub
Taxanaha Apple Watch 7 wuxuu ku imaan doonaa 2 cabbir oo cusub: 41 iyo 45mm. Intaa waxaa dheer, waxay u keeni doontaa dials cusub oo la hagaajiyay meesha bandhigga cusub.
Fikradda 'watchOS 9' ayaa saadaalineysa imaanshaha widget -yada iyo wejiyada saacadaha cusub
Imaanshaha bisha Sebtembar waxay la mid tahay bilaabista nidaamyo cusub oo hawlgal oo rasmi ah Apple. KU ...
Apple waxay cusboonaysiisaa shuruudihii Dukaanka App -ka iyada oo loo danaynayo soo -saareyaasha
Apple waxay kula heshiisay horumariyeyaasha Mareykanka inay wax ka beddelaan shuruudaha adeegsiga App Store. Waxaan kuu sheegeynaa sida ay noo saameyneyso isticmaaleyaasha.
Cilmi -baarista Ka -hortagga ayaa sheeganeysa in Apple Watch uu weli yahay # 1
Cilmi -baarista Ka -hortagga ayaa Muujineysa Xog -dhoofinta loogu talagalay Wearables iyo Apple Watch Weli Iibiye Sare
Apple TV + 'Dhammaan Aadanaha' iyo 'Wicitaannada' ayaa ku guuleystay Emmy Awards
Apple waxay maamushaa inay ku guuleysato laba Emmy Awards oo ka socota Akademiyada Telefishinka Mareykanka ee taxanaha 'Dhammaan aadanaha' iyo 'Wicitaannada'.
Sida laga soo xigtay shirkadda Bernstein, Google waxay bixin kartaa 15.000 milyan sannadka 2021 si ay u sii ahaato mashiinka raadinta caadiga ah ee macruufka.
Dillaac cusub ayaa muujinaya xarig aad ku arki karto sumadda 45mm ee taxanaha cusub ee Apple Watch 7
Apple TV + 'Musiibada Macbeth' waxay xiri doontaa Bandhig Faneedkii 65 -aad ee BFI London
Filimka Musiibada Macbeth ayaa soo bixi doonta Oktoobar 17 marka la joogo Bandhigga Filimka London, xafladda xidhitaanka.
Wararka xanta cusub ayaa tilmaamaya laba cabbir oo cusub oo loogu talagalay taxanaha Apple Watch 7
Wararka xanta ah ee cusub ayaa soo jeedinaya in dib -u -qaabaynta Apple Watch Series 7 uu la iman doono gacanta oo ay ku jirto kororka shaashadda.
iPad Air oo ah 569 euro, AirPods Max oo ah 499 euro iyo wax soo saarka Apple ee kale
Waad ku mahadsan tahay heshiiska u dhexeeya Apple iyo Amazon inay si toos ah u iibiyaan alaabtooda iyada oo loo marayo aaladda e-commerce ...
Apple Watch waxay caawisaa samatabbixinta dhibbane shil baabuur
Ka dib markii saameyntu dhacday oo aragtay in isticmaaleyaasheedu aysan dhaqdhaqaaqin, Apple Watch waxay ogeysiisay adeegyada gurmadka.
Raad -raac cusub oo loogu talagalay taxanaha Fundación ayaa hadda la heli karaa
Apple waxay daabacday trailer cusub oo loogu talagalay taxanaha Aasaaska, oo ka mid ah taxanaha ugu badan ee la filayo sannadkan adduunka telefishanka
Tim Robbins ayaa sidoo kale "saxeexay" Apple TV +
Waxaan arki doonnaa isaga oo ka garab ciyaaraya Rebecca Ferguson taxane cusub oo loogu magac daray "Dhogor" oo ka soo muuqan doona Apple TV + sannadka soo socda.
AirPods 3 ayaa si baaxad leh looga soo saari doonaa Shiinaha
Soo saarista AirPods 3 hadda waxay ku sii nagaan doontaa Shiinaha sababa la xiriira dhibaatooyinka kordhinta kiisaska COVID ee Vietnam
Liiska shuruudaha shaandhaynta ee Shiinaha ayaa sidoo kale khuseeya Hong Kong iyo Taiwan
Tirada ereyada faafreebka ee Shiinaha ee aan lagu qori karin aaladaha Apple waa kan ugu sarreeya adduunka.
Apple waxay cusbooneysiineysaa Carpool Karaoke xilli 5aad waxayna imaan doontaa Apple TV +
Xilliga shanaad ee Carpool Karaoke ayaa la heli doonaa, marka lagu daro Apple Music, iyada oo loo sii marayo madal fiidiyaha fiidiyowga ah, Apple TV +
Ogosto 28, u diyaar garow caqabadaha seerayaasha qaranka
Inta lagu jiro Sabtida soo socota, Ogosto 28, Apple wuxuu ku dari doonaa loolan dhaqdhaqaaq cusub oo loogu talagalay Apple Watch oo la xiriira jardiinooyinka qaranka
Nooca cusub ee firmware ee Siri Remote
Apple ayaa shalay cusbooneysiisay nooca firmware -ka ee Apple TV -ga fog, Siri Remote
Apple wuxuu sii daayaa beta 6 ee watchOS 8 dhammaan soosaarayaasha
Toddobaad ka dib betas shanaad ee nidaamyada hawlgalka Apple, beta lixaad ee watchOS 8 ee Apple Watch ayaa la sii daayaa.
Soo -bandhigyadan soo daatay ee Apple Watch Series 7 waxay xaqiijin doonaan isbeddelkeeda naqshadeynta
Soo-saareyaal tayo sare leh oo cusub ayaa soo daatay oo muujinaya isbeddelka naqshadeynta ee Apple Watch Series 7 iyo cidhifyadiisa fidsan ee cusub.
iCloud for Windows wuxuu ku darayaa shaqo cusub si loo maareeyo furaha sirta ah
Codsiga iCloud ee Windows ayaa la cusbooneysiiyay si loogu daro codsi cusub oo lagu maareeyo sirta iCloud
Rapper Kanye West ayaa jebiyay rikoorkii tooska ahaa ee Music Apple
Toddobaadkii hore isaga oo ku nool Apple Music wuxuu helay 5,4 milyan oo aragti. Iyo tan ugu xiisaha badan, baahintu ma lahayn wax maqal ah, waxay ahayd kaliya fiidiyow laga soo qaaday kamarad wali ku jirta istuudiyaha duubistiisa.
AirPods Pro oo ka hooseysa 200 euro iyo wax soo saarka Apple ee kale
Dufcaddii cusub ee dalabyada iyo gorgortanka Apple: AirPods ka jaban, MacBook M1, Apple Watch Series 6 iyo dalabyo kale oo badan
Apple waxay soo saartey xirmo dhejisyo ah xilli -ciyaareedka cusub ee Ted Lasso
Big Apple wuxuu bilaabay baakad dhejisyo loogu talagalay iMessages diiradda lagu saaray kor u qaadista xilli -ciyaareedka labaad ee Ted Lasso ee Apple TV +.
AirPods si loo cabbiro heerka neefsashada
Apple AirPods waxay cabbiri kartaa heerka neefsashada ee isticmaaleyaasha mahadnaq makarafoonnada
Balaarinta Apple Pay ee Bartamaha Ameerika waxay ka bilaaban doontaa Costa Rica
Wax walba waxay u muuqdaan inay muujinayaan in Costa Rica ay noqon doonto waddankii ugu horreeyay Bartamaha Ameerika ee hela taageerada Apple Pay.
Waxaan mar kale ku arki doonaa Tom Hanks filim cusub oo la hubo inuu noqon doono Hit sida “Greyhound” oo kale sanadkii hore.
Samsung iyo WhatsApp waxay ku muujinayaan dhacdada aan la furin ikhtiyaarka ah in lagu wareejiyo sheekaysiga iyo xogta laga helo barnaamijka farriinta laga bilaabo iOS illaa Android
Apple waxay bilawday nooca beta 8 ee watchOS ee soosaarayaasha waxayna ku darsataa sumad cusub barnaamijka cimilada iyo wararka kale
Apple wuxuu ka noqdaa dalabka iDOS 2 ee oggolaaday in lagu rakibo MS-DOS iyo Windows 3.1 gudaha IOS
Sida qorshaysan, Apple waxay ka saartay dalabka kuu oggolaaday inaad ku rakibto MS-DOS iyo Windows 3.11 iPad-ka IOS.
Soo -saaraha "Ted Lasso" wuxuu ka iibiyey taxane cusub Apple TV + cinwaan looga dhigay "Daanyeer Xun"
Waxay noqon doontaa taxane riwaayad ah oo uu jilayo Vince Vaughn. Dhawaan ayay bilaaban doontaa toogashada, marka lama sii deyn doono ilaa guga soo socda.
Heshiisyada Apple Watch Series 6 GPS + Cellular iyo alaabta kale ee Apple
Haddii aad rabto inaad lacag ku keydiso heshiisyada ugu wanaagsan Amazon ee alaabada Apple, waxaad durba qaadataa waqti dheer inaad booqato maqaalkan.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa Physical xilli labaad iyo Codka Yar ayaa la raray
In kasta oo taxanaha Jirka uu ku guuleystay xilli ciyaareedkii labaad, waxay umuuqataa in Little Voice ay joogtay hal xilli.
Brendan Fraser ayaa ku biiraya jilayaasha filimka Killers of the Flower Moon
Jilaaga filimka Mummy ayaa ku biiray jilaaga filimka soo socda ee Martin Scorsese kaas oo si gaar ah looga daawan doono Apple TV +
Taxanaha Jirka, oo la cusbooneysiiyay xilli labaad
Apple ayaa ku dhawaaqday in taxanaha Rose Byrne Physical uu yeelan doono xilli labaad.
Apple Cash wuxuu hadda la jaan qaadayaa kaararka deynta Mastercard
Apple Cash waxay la jaanqaadi kartaa kaararka debit Mastercard dhowr saacadood sida ay sharxeen qaar ka mid ah adeegsadayaasha adeegga
Henry Cavill, John Cena iyo Samuel L. Jackson waxay ku biireen Apple TV + filim jaajuus ah
Argylle waa filimka basaasnimada xiga ee lagu soo bandhigi doono Apple TV + oo ay jilayaan Henry Cavill, John Cena iyo Samuel L. Jackson.
HomePods wali waxay ka hooseeyaan iibinta afhayeenka Amazon iyo Google
Apple waxay lahaan doontaa saamiga suuqa wax ka yar 10% marka loo eego HomePods lagu iibiyo Mareykanka
Codsiga farriinta caanka ah ee WhatsApp -ka wuxuu ku xiraa ogeysiisyada sheekooyinka kaydsan markii aan cusbooneysiinno
Apple waxay diiwaangelisaa lix nooc oo cusub oo Apple Watch ah guddiga Eurasia
Muddo bil gudaheed ah Keynote suurtogal ah, Apple waxay diiwaangelisaa Mac -yada cusub iyo lix nooc oo Apple Watch ah oo ay la socdaan guddiga Eurasian.
AirPods Pro oo loogu talagalay 190 euro iyo dalabyo kale oo weyn oo Apple ah
Airpods Pro burburin ama 1% qiimo dhimis MacBook Pro M20 ayaa ah wax yar oo ka mid ah hadiyadaha badan ee maanta ee alaabada Apple.
Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad sameyso halbeegyo dheeri ah maxaa yeelay waxaad dib u soo xusuusan doontaa taxanaha Apple Watch Series 6 hadda markay bilaabeyso Taxanaha 7, sidii ku dhacday Taxanaha 5.
Waa kuwee moodooyinka Apple Watch ee la jaan qaada nooca cusub ee la bilaabi doono wax yar watchOS 8
Ikhtiyaarka ah in sheekooyinka lagu keydiyo WhatsApp waxay qaadataa wax ka badan hal madax mawduuca ogeysiisyada
Apple TV + wuxuu cusbooneysiiyaa taxanaha loogu talagalay Dhammaan Aadanaha xilli afaraad
Wax walba waxay u muuqdaan inay muujinayaan in Apple ay ugu dambeyntii cusbooneysiisay xilli afaraad taxanaha loogu talagalay Dhammaan Aadanaha
eBay waxay hadda taageertaa lacagaha Apple Pay
Websaydhka EBay wuxuu bilaabaa inuu aqbalo lacagaha Apple Pay meelaha qaarkood
watchOS 7.6.1 waxaa hadda sii daayay Apple oo saxaya qaar ka mid ah dhibaatooyinka amniga ee lagu helay nuqulkii hore
Ma ku guuleysatay inaad hesho PS5? Hadda Sony wuxuu ku biirayaa Apple wuxuuna kiciyaa dallacsiinta inuu ku raaxeysto 6 bilood ee Apple TV + bilaash ah.
Waxaan ku tusineynaa sida aad uga heli karto iPhone-ka adoo adeegsanaya Apple Watch iyo xitaa mugdiga
Qaar ka mid ah alaabta Aqara ee la jaan qaada Apple HomeKit waxay horey u haysteen liistada ay ku xirnaadaan internetka
Soosaarka ballaaran ee jiilka saddexaad ee AirPods ayaa loo qorsheyn doonaa inuu bilowdo inta lagu jiro bisha Ogosto
Mid ka mid ah ka dib soo bandhigiddooda, Beats Studio Buds ayaa hadda laga iibsan karaa inta badan waddamada Yurub, oo ay ku jiraan Spain.
Apple ayaa kaliya cusbooneysiisay boggooda dhowr talooyin oo nadiifin ah oo loogu talagalay qalabkeenna. Weligaa waligaa ha caddeynin ama haydarojiin peroxide
Nuqulada AirPods ayaa ilaa hada Apple ku kacday ilaa $ 3.200 bilyan iyadoo la tixgelinayo dhowr arrimood.
Apple waxay ka fikireysaa inay soo bandhigto adeeg lacag bixin oo dib loo dhigay oo loogu talagalay dadka isticmaala Apple Pay, kiiskan oo loo yaqaan Apple Pay Later
19ka magacaabis ee loo baahnaa, Apple TV + wuxuu ku guuleystay 3 Maalinti Emmy Abaalmarinta taxanaha Little Zen iyo Halkan ayaan joognaa
La kulan isbeddel si loo kordhiyo royalties-ka muusikada ilaa 50% Apple Music, miyir leh, waxay hubisaa in ay tahay 'meherad cidhiidhi ah'.
Waxaad ku daawan kartaa Apple TV + lacag la’aan haddii aad tahay arday
Waxaad ku daawan kartaa Apple TV + lacag la’aan haddii aad tahay arday. Si tan loo sameeyo, waa inaad iska qortaa Apple Music Student. Waxaad ku heli doontaa qiimo dhimis 50% ah Apple Music iyo Apple TV + bilaash.
Apple waxay bilawday dalabyo waxbarasho iyada oo hoos imaanaysa kor u qaadida Dugsiga Ku noqoshada
Dhiirrigelinta ku noqoshada dugsiga ee waxbarashada waxaa bilaabay shirkadda Apple. Marka lagu daro qiimo dhimista dhowr ka mid ah wax soo saarkooda, waxay siinayaan AirPods.
Daboolka cusub ee Elago ee Siri Remote mar dambe ma waayi doontid
Elago waxay soo bandhigtay dabool cusub oo loogu talagalay Siri Remote cusub oo ay kujirto dalool la dhigo AirTag
Qaybta Tijaabinta Sonkorta Dhiigga ee Rockley ee Aan Fidmin
Alaab-qeybiyaha Apple Rockley wuxuu ku jiri doonaa wajiga tijaabada dareemayaal awood u leh inuu cabbiro gulukoosta dhiigga iyadoo aan la daalin
Batariga Apple ee MagSafe iyo awoodiisa, mAh ugu qaalisan suuqa?
Waxaan dooneynaa inaan soo ogaanno Battery-ka cusub ee MagSafe, awooddiisa madax-bannaanida ee layaabka leh iyo astaamaha kale ee qaarkood.
Apple wuxuu soo saarayaa laba midab oo cusub oo loogu talagalay xargaha AirTag
Apple waxay soo saartay laba midab oo cusub oo loogu talagalay xargaha maqaarka iyo suunka fure maqaarka ee AirTags: Baltic Blue iyo California Poppy.
Nooca 15 ee softiweerka HomePod ee beta 3 ugu dambeyn wuxuu soo bandhigayaa taageerada codka maqalka ah ee Apple Music ay bixiso.
Apple wuxuu sii daayaa beta cusub ee HomePod 15 Software si loo hagaajiyo kuleylka
Apple wuxuu sii daayaa beta cusub oo ah Software HomePod 15 si loo saxo kuleylka. Haddii aad ka mid tahay martida oo aad rakibtay, hadda waad cusbooneysiin kartaa.
Apple wuxuu iftiiminayaa xiriirka ka dhexeeya iPhone iyo Apple Watch xayeysiiskiisa cusub
Xayeysiintan cusub ayaa muujineysa xiriirka ka dhexeeya iPhone iyo Apple Watch iyadoo la muujinayo ikhtiyaarka ah in laga waco iPhone-ka saacadda si loo helo.
Nanoleaf Elements, dabeecadda waxay ku timaadaa laydh caqli badan
Waxaan ka tijaabinay qaybaha Elements ka Nanoleaf, muuqaal aad u qurux badan oo dabiici ah oo lagu xardhay gurigaaga
CNMC wuxuu bilaabayaa baaritaan ka dhan ah Apple iyo Amazon oo ku saabsan dhaqamada ka dhanka ah tartanka
CNMC, oo ah hay'ad ku tartameysa Isbaanishka, waxay bilaabeysaa dacwada faylka cunaqabateynta ee ka dhanka ah Apple iyo Amazon tartan yar.
Muuqaalkii ugu horreeyay ee taxanaha Mr. Corman oo uu weheliyo Joseph Gordon-Levitt
Telefishanka Apple TV + YouTube ayaa soo saaray filimkii ugu horreeyay ee taxane ah ee Mr. Corman, oo ah taxane soo bixi doona Ogosto 6.
Apple Watch ma caawin kartaa ogaanshaha iyo la qabsiga saameynta coronavirus?
Daraasad dheeri ah oo ku saabsan saameynta cudurka coronavirus ee lala sameeyay isticmaalayaasha isticmaala Apple Watch ama aaladda casriga ah
Waxaad hadda arki kartaa trailer cusub xilli ciyaareedkii labaad ee "Ted Lasso"
Waxaad hadda arki kartaa filim cusub oo loogu talagalay xilli-ciyaareedkii labaad ee "Ted Lasso". Waxaa laga daawan doonaa Apple TV + July 23.
Difaac taxanaha Yacquub ee DVD iyo Blu-Ray
Taxanaha Defender Jacob waxaa lagu sii daayay DVD-yada iyo Blu-Ray ee dalka Mareykanka waqti xaadirkana lama oga inuu gaari doono dalal badan.
HomePods markale waxay halis ugu jiraan dhimasho cusbooneysiin
Mar labaad, dhibaato ka jirta softiweerka HomePod wuxuu ka dhigi karaa afhayeenkaaga gebi ahaanba inaan la isticmaali karin
Apple TV wali wado dheer buu uga jiraa Amazon Fire TV
Apple TV xafiiltamaan sida Amazon Fire TV ama Roku waxay sii wadaan inay hogaamiyaan shirkada Cupertino iibka.
Waad salaaman tihiin soosaaraha Sunshine ee Barnaamijka Subaxnimada waxaa iibsan kara shirkadda Apple
Apple waxay tixgelinaysaa iibsashada soo saaraha taxanaha caanka ah The Morning Show, oo loo yaqaan 'Hello Sunshine'
AR Tour Ocean waxay kaa qaadeysaa gunta badda ee iphone
AR Tour Ocean waa codsi bilaash ah oo ina tusaya qaar ka mid ah noocyada badda ee badda
Soosaarayaasha qalabka ayaa ka dhammaaday saamiga Apple Watch ee cajaladaha ku shubaya
Soosaarayaasha qalabka ayaa ka dhammaaday saamiga Apple Watch ee cajaladaha ku shubaya. Cudurka faafa awgiis, waxsoosaarkeedii ayaa saameyn ku yeeshay, mana jirto wax la heli karo.
Qof dumar ah ayaa badbaadisay nolosheeda iyada oo ay ugu mahadcelinayaan Apple Watch-keeda
Telefishinka Apple Watch ayaa badbaadiyay nolosha haweeney qarka u saarneyd in wadno xanuun ku qabto dalka Mareykanka
Nooca ugu horreeya ee dhoobada Apple Watch ayaa muuqda
Waxay ka muuqataa shabakada Apple Watch qaabka kiiska dhoobada ee la soo saaray 2014
Shirkadda Masimo waxay dooneysaa inay horjoogsato iibinta Apple Watch Series 6
Shirkadda Masino ayaa cambaareysay Apple oo ay ku eedeeysay inay xaday sirta ganacsiga ee ay u isticmaaleyso aaladda Apple Watch
Spotify waxay rabtaa inay ku ballaariso ganacsigeeda riwaayadaha riwaayadaha
Shirkada iswiidhishka ah ee heesaha fidisa, Spotify, waxay dooneysaa inay balaariso ganacsigeeda iyadoo loo marayo iibinta tigidhada riwaayadaha tooska ah iyo tooska
Apple waxay la wareegtaa xuquuqda iibiyaha City dabka si ay u sameyso taxane uu soo saaray abuuraha The OC iyo Gossip Girl.
Apple waxay sii wadi doontaa inay lacag ku biiriso (PRODUCT) RED dagaalka Sanduuqa Caalamiga ee ladagaalanka COVID-19
Alaabada Apple ee loo yaqaan (PRODUCT) RED ayaa sii wadi doonta bixinta aruurinta la dagaalanka COVID-19
TikTok wuxuu kordhiyaa dhererka fiidiyowyada ilaa 3 daqiiqo
Nooca cusub ee TikTok wuxuu ku kordhinayaa dhammaan isticmaaleyaasha suurtagalnimada in warbaahin laga dhigo muddo dhan illaa saddex daqiiqo
Horumariyayaashu waxay awoodi doonaan inay tijaabiyaan betas wixii ku saabsan cusbooneysiinta AirPods Pro mustaqbalka
Apple waxay ka shaqeyneysaa keenista betas ee mustaqbalka AirPods Pro cusbooneysiinta horumariyeyaasha barnaamijka barnaamijka bannaan.
Qiyaastii 100 milyan oo AirPods ah ayaa la iibiyay 2022
Guusha 'Apple's True Wireless headphones' waxay ka muuqan doontaa kudhowaad 100 milyan oo iibin ah sanadka 2021.
Marka waxaad ka soo dejisan kartaa qaybaha cusub ee waddanka Apple Watch-kaaga
Waxaan ku baraynaa sida loo soo dejiyo qaybaha cusub ee rasmiga ah ee Apple si ay uga taageeraan ciyaartoydeena Ciyaaraha Olombikada.
Hadda waxaa loo heli karaa Xarigga Loop-ga Caalamiga ah ee Uruurinta Isboortiga ee loogu talagalay Apple Watch
Apple waxay soo saartay Qalab Cusub oo Loogu Talagalay Isboortiga Caalamiga ah oo leh midabbada calanka ilaa 22 dal
Midabyo badan iyo batari dheeraad ah oo loogu talagalay taxanaha Apple Watch 7
Taxanaha 'Apple Watch Series 7' wuxuu ku imaan doonaa noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah iyo sidoo kale ismaamulkiisa si weyn ayaa loo kordhin doonaa.
Fundación, oo ah taxanaha sheekooyinka sayniska ee Apple TV +, ayaa la bilaabay Sebtember
Taariikhda la sii deyn doono taxanaha sheekooyinka sayniska sayniska, oo ku saleysan buugaagta uu qoray Isaaq Asimov, ayaa la qorsheeyay bisha Sebtember
Iyada oo la adeegsanayo IOS, isku xirnaanta barta marinku wuxuu yeelan doonaa amniga WPA3
IOS 15 waxay abuuri doontaa dhibco marin looga helo iPhone ama iPad si ay ula wadaagaan isku xirnaanta loo ilaaliyo borotokoolka WPA3
Muuqaalka filimka CODA hadda waa la heli karaa
Laba bilood ka hor bilowga filimka CODA ee ka baxa Apple TV +, goos gooskii ugu horreeyay ee filimkan, ee ku guuleystay xafladda Sundance, ayaa hadda la heli karaa
Wejiga cusub ee sawirka ayaa durba ka soo muuqday watchOS 8 beta 2. Iyada oo leh astaamo cusub, qaar iyaga ka mid ah ayaa aad u qurux badan.
Apple waxay daabacdaa xayeysiinta muusikada "Schmigadoon!" kaas oo furmaya 16-ka July
Apple waxay daabacdaa xayeysiinta muusikada "Schmigadoon!" kaas oo furmaya 16-ka July. Waxaad hadda ku shubtay koontadaada rasmiga ah ee YouTube.
Suumanka casriga ah ee nooca Apple Watch ah?
Apple waxay baari laheyd Apple Watch-keeda suurtagalnimada isku xirka xargaha smart-ka sawirkaanna wuu cadeynayaa
Qeyb yar oo loogu talagalay Apple Watch Series 7 ayaa ku dari doonta meel bannaan gudaha
Xanta ayaa sheeganeysa in taxanaha taxanaha ah ee 'Apple Watch' uu yeelan doono meelo badan oo ka mid ah qaybaha gudaha iyada oo ay ugu wacan tahay yareynta jabka
Glenn Close si uu uga qayb galo xilli ciyaareedkii labaad ee Tehran
Qeybta labaad ee taxanaha Tehran waxaa kasoo muuqan doona atariishada Glenn Close.
Apple TV + wuxuu helay ku dhowaad 400 magacaabis wuxuuna ku guuleystay 112 abaalmarin
Iyadoo ku dhowaad laba sano uu suuqa ku jiray, Apple TV + wuxuu kasbaday in kabadan 400 magacaabid dhammaan waxyaabaha ay bixiso maanta.
Barnaamijka Tado wuxuu ku darayaa kor u qaadista muuqaalka
Majiro cusbooneysiinta barnaamijka Tado ee kudarsada isdhexgalka iyo hagaajinta muuqaalka maaraynta kululaynta
Mustaqbalka Siri Remote wuxuu umuuqan karaa tilmaame laser ah
Aan aragno, waxaan ku dari karaa horumarin xiiso leh Siri Remote ee mustaqbalka. Waxay ku muujineysaa shati dhowaan la xareeyay
Oprah Winfrey, Ted Lasso iyo 1971 dokumentari ayaa siiya Apple TV abaalmarino badan +
Saddex barnaamij oo cusub oo laga heli karo Apple TV + ayaa helay abaalmarinno cusub marka lagu daro kuwii ay ku guuleysteen sannadkan oo dhan.
Waxaa la siidaayay filimka 'trailer' xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee "Ted Lasso" oo soo baxaya 23-ka July
Waxaa la siidaayay filimka 'trailer' xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee "Ted Lasso" oo soo baxaya 23-ka July. Waxaad horeyba u arki kartaa horudhac xilli ciyaareedkii labaad.
Sida loo helo istiikarada WhatsApp
Sideed u soo dagsankartaa istiikarada rasmiga ah ee kujira barnaamijka fariimaha ee WhatsApp
Audio Spatial iyo Audio Lossless hadda waxaa laga heli karaa Apple Music for Android. Isbedelada ayaa gaaraya beta-dii ugu dambeysay.
Kevin Lynch, madaxweyne ku xigeenka tiknolojiyadda Apple, wuxuu xaqiijiyay in AirPods ay leeyihiin awood badan oo ay kula socdaan caafimaadka.
Apple wuxuu ku sigtay inuu soo bandhigo dhoobada madow ee Apple Watch
Apple wuxuu ku sigtay inuu soo bandhigo dhoobada madow ee Apple Watch. Waxaa laga yaabaa inuu u diiday inuu lamid yahay birta Apple Watch Space Black.
Xarig cusub oo Nomad Titanium ah, oo qaali u ah Apple Watch-kaaga.
Waxaan ku tijaabinay suunka Titanium-ka Apple Watch Nomad, oo ah raaxo dhab ah oo saacadeena ah, xarrago leh oo raaxo leh.
Dareenka dareeraha gulukooska ee ku jira Apple Watch ama Galaxy Watch 4
Waxay umuuqataa inay qaadaneyso waqti dheer in lagu arko dareeraha gulukoosta dhiigga ee Apple Watch
Ka raadinta istiikarada barta WhatsApp way fududaan doontaa dhowaan
Nooc beta ah oo Watsa ah ayaa ku daraya toobiye si aad si fudud ugu hesho istiikarada inta aad ereyga qoraysid
Apple wuxuu jaraya Apple TV + tijaabada bilaashka ah laga bilaabo sanad ilaa 3 bilood laga bilaabo Julaay
Laga bilaabo 1-da Luulyo, muddada tijaabada bilaashka ah ee Apple ay siin doonto macaamiisheeda cusub waxay noqon doontaa 3 bilood halkii ay ahayd sanad.
Apple ayaa ku dhawaaqday Taariikhda ay soosaarayso xilliga XNUMX-aad ee Bandhiga Subaxnimo
Waxaan horeyba u ognahay taariikhda bilowga ee xilli-ciyaareedka labaad ee taxanaha Bandhigga Subax ee Apple TV +
Taxanaha Apple Watch 7 wuu sii dhumuc weynaan doonaa isla markaana leh shaashad ballaadhan
Taxanaha Apple Watch 7 wuu sii dhumuc weynaan doonaa isla markaana leh shaashad ballaadhan. Waa warar xan ah oo uu sheegayo Mark Gurman oo ka tirsan Bloomberg.
Xanta cusubi waxay tilmaamaysaa Apple Watch SE 2 cusub iyo nooc cusub oo Explorer ah
Xanta cusub ayaa ka soo burqanaysa Bloomberg oo tilmaamaysa Apple Watch SE cusub iyo Explorer-ka muddada dheer la sugayay ee 2022.
Waxaa la bilaabay duubista xilli ciyaareedkii labaad ee "See" oo soo bixi doonta Ogosto 27
Waxaa la siidaayay filimka 'trailer' xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee "See" kaas oo soo bixi doona Ogosto 27. Oo la xaqiijiyay xilli saddexaad.
Marka la sii daayo macruufka 15, Apple wuxuu u oggolaan doonaa dadka isticmaala inay ka codsadaan lacag celin wax-ka-iibsashada gudaha barnaamijka laftiisa.
Iyada oo leh tvOS 15 waxaan ku gali karnaa Aqoonsiga Wajiga iPhone-ka
Hadda si fudud ayaan u geli karnaa oo u buuxin karnaa xogta tvOS-ga annaga oo isticmaaleyna Aqoonsiga Face-ka ee iPhone-ka.
Loolan cusub oo firfircoon ayaa soo socda. U dabbaaldeg Maalinta Caalamiga ee Yoga
Juun 21 waxaad ku dabaaldegi kartaa Maalinta Caalamiga ee Yoga maalinta Apple oo aad ku guuleysato caqabadan
Waxaan horeyba u haysanay trailer iyo maalinta furitaanka ee Apple TV + taxanaha «Duulaan»
Waxaan horey u haysanay trailer iyo maalinta furitaanka ee Apple TV + taxanaha "Duulaan". Waxay noqon doontaa Oktoobar 22 markay 10-ka qaybood ee silsiladda taxanaha ah bilaabi doonaan inay hawada soo galaan.
Muraayadaha Apple qeybtii labaad ee sanadka 2022
Muraayadaha Apple ayaa imaan kara inta lagu jiro rubuca labaad ee sanadka soo socda, ayaa sharxeysa warbixin cusub oo ay soo saartay Ming-Chi Kuo
Waji cusub oo waardiye ah ayaa ka muuqda watchOS 8 oo Apple aanu soo bandhigin
Aag cusub ayaa ka muuqda mid ka mid ah fadhiyada Apple ee lala yeelanayo horumariyeyaasha WWDC, oo laga yaabo inay u yimaadaan WatchOS 8
watchOS 8 ayaa looga dhawaaqay WWDC 2021 iyadoo lagu soo bandhigayo astaamo cusub Tababarka, Neefsashada, Hurdada iyo barnaamij aad u tiro badan.
Apple waxay soo bandhigtay adeegyadeeda cusub ee ku dhexjira iCloud + ee WWDC 2021 si loo ilaaliyo asturnaanta iyo amniga.
Apple wax layaab leh ayaa noo haysa berri kadib WWDC waana taas Apple Music waxay lahaan doontaa dhacdo u gaar ah shaqooyinkeeda cusub.
Nanoleaf Triangles iyo Mini Triangles: midab, laxanka iyo xakamaynta otomaatiga guriga
Nanoleaf wuxuu noo ogolaanayaa inaan isku darsanno saddexagalkeeda iyo Mini Triangles si aan u abuurno naqshado u gaar ah oo waliba leh shaqooyin xiiso leh.
Apple waxay u egtahay askance at Android waxayna diyaarisaa barnaamij si ay u hesho AirTags
Apple waxay ku dhawaaqday inay timid barnaamijka Android si ay u raadsato AirTags ugana hortagto raadinta xun.
Xilli ciyaareedkii labaad ee TV-ga Apple + + taxanaha «La Costa de los Mosquitos» waa la xaqiijiyay
Xaqiijiyay xilli ciyaareedkii labaad ee TV-ga Apple + + taxanaha "La Costa de los Mosquitos". Waxaa la sii deyn doonaa 2022.
Apple Watch wuxuu "ku dhiiri galiyaa" bukaanada qaba Atrial Fibrillation in lagu daaweeyo habka wadnaha
Apple Watch wuxuu "ku dhiirrigeliyaa" bukaanada qaba Atrial Fibrillation in lagu daaweeyo habka wadnaha
WWDC 2021 oo layaab leh: homeOS ma noqon doontaa nidaam hawlgal oo cusub?
Shaqo shaqo oo laga helay Apple ayaa si qalad ah u muujisay magaca homeOS, oo noqon kara nidaam hawlgal oo cusub oo aan ku arki lahayn WWDC 2021.
Apple TV + waxaa hadda loo heli karaa aaladda TV-ga Nvidia Shield
Apple TV + waxaa hadda loo heli karaa aaladda TV-ga Nvidia Shield. Iyo waliba TV-yada ku saleysan Android TV.
Kaarka Coinbase wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple Pay
Kaarka wax lagu beddelo ee 'Coinbase' ee kaarka beddelaadda 'cryptocurrency' ayaa hadda taageeraya Apple Pay. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahin si aad u hesho.
Xakamee qiimaha nalkaaga iPhone illaa kan labaad
Waxaan idinla wadaageynaa qaab fudud oo loo adeegsado dalabka noo ogolaanaya inaan aragno qiimaha kWh marwalba
Cusbooneysiiyay qolka xafiiska Apple: Bogagga, Lambarada iyo Muhiimka
Apple waxay cusbooneysiisaa boggaga, Nambarada, iyo barnaamijyada Muhiimka ah si ay ula jaanqaadaan
Midabyo cusub ayaa u soo ifbaxay xarig-furayaasha AirTag ee aysan sii deyn Apple
Bakhaarka loo yaqaan 'Ebay' ayaa ka daadanaya qaar ka mid ah silsiladaha furaha iyo xargaha oo Apple aysan helin inay ku soo bandhigto markii la bilaabay 'AirTags'.
Sida laga soo xigtay Gurman, xilligan ma lahaan doonno jiilka labaad ee AirPods Max
Sida laga soo xigtay Mark Gurman, Apple weli ma diyaarinayso jiil labaad oo caan ah AirPods Max
Odyssey-ka cajiibka ah ee soo dejinta cusbooneysiinta taxanaha Apple Watch 3
watchOS 7.4 iyo 7.5 waa lagama maarmaan in la dhexgeliyo astaamaha cusub ee macruufka 14.5. Si kastaba ha noqotee, cusbooneysiinta taxanaha Apple Watch 3 waa odyssey.
Sida dib loogu cusbooneysiiyo barnaamijyadii horay loo iibsaday ee ku xirnaa iOS
Maanta waxaan arki doonaa sida aad u soo degsan karto codsi aad ka tirtirtay iPhone-kaaga ama iPad-ka laakiin aad horay u soo iibsatay
Apple Watch waxay waddaa Ballaarinta Suuqa weyn ee Smartwatch ee Q2021 XNUMX
Apple Watch waxaa loo taagay inuu yahay hogaamiye warshad, taasoo kobcineysa kororka saacadaha saacadda labaad ee sanadka 2021.
Netflix waxay istaagi kartaa Apple Arcade oo leh adeeg ciyaar fiidiyoow ah
Xanta ayaa soo jeedinaysa in maamulayaasha Netflix ay baarayaan fikradda ah in la bilaabo adeeg ciyaar fiidiyoow ah oo la mid ah Apple Arcade.
Lebron James wuxuu horey u isticmaalay Beats Studio Buds cusub kahor bandhigooda rasmiga ah
Ciyaartoyga Los Angeles Lakers Lebron James ayaa durbaba isticmaalaya Beats Studio Buds aan la sii deyn ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin
Kadib xaddidaadda 30FPS, YouTube wuxuu dib-u-awood u siinayaa 4K fiidiyaha fiidiyowga ee 60FPS laakiin kaliya loogu talagalay Apple TV 4K ugu dambeeyay.
Codsiga WhatsApp waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo ikhtiyaarka lagu ciyaaro farriimaha codka oo leh xawaare isbeddel ah iyo in ka badan
Barnaamijka Apple TV ee Xbox wuxuu helayaa taageerada Dolby Vision
Toddobaadkan barnaamijka Apple TV ee loogu talagalay barnaamijka 'Xbox console' ee Microsoft wuxuu heli doonaa taageerada tikniyoolajiyadda Dolby Vision
Sida laga soo xigtay maamulaha Apple, Siri Remote cusub uma baahna inuu ku jiro barnaamijka Raadinta maxaa yeelay ma waayi doonno
Apple ee VP ee Suuqgeyntu waxay sharraxaysaa sababta aynaan ugu isticmaali karin Siri Remote cusub barnaamijka Raadinta.
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 7.5 dhammaan isticmaaleyaasha
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 7.5 dhammaan isticmaaleyaasha. Dhammaan aaladaha Apple hadda waxay heleen cusboonaysiinta u dhiganta.
Apple waxay xaqiijisay in cusbooneysiinta soo socota ay u oggolaan doonto HomePod iyo HomePod mini si ay u taageeraan maqalka aan qasaaraha lahayn.
Apple TV-ga cusubi wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku soo saarto dhammaan codka telefishankaaga HomePods
Apple TV-ga cusub ee 4K (jiilka 2aad) wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku soo saarno dhawaaq kasta oo TV-gayaga ka mid ah innagoo isticmaaleyna HomePods-keena.
Dhowr ka mid ah iibiyeyaasha Apple ee Vietnam ayaa loo xiray sababo la xiriira kororka kiisaska coronavirus
Kordhinta kiisaska coronavirus ee xarumaha shirkadaha wax keena ee Apple ee Vietnam, ayaa ku qasbay dowladda inay xirto 2 warshadood
Podcast 12 × 31: Apple Music, Dolby Atmos iyo HiFi
Waxaan kuu sharraxeynaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Apple Music-ka cusub ee Dolby Atmos iyo muusig aan tayo lahayn
Tani waxay noqon doontaa taxanaha soo socda ee Apple Watch 7
Jon Prosser wuxuu muuqaal noogu muujiyey waxa dhici kara Apple Watch Series 7 ee soo socda, kaasoo sii deyn doona naqshadda iyo midabada.
TwelveSouth Waxay Soo Bandhigeysaa Kooxda New WatchSleeve 2 Band oo loogu talagalay Apple Watch
TwelveSouth ayaa hadda soo bandhigtay qalab loogu talagalay Apple Watch-kaaga kaas oo kuu oggolaanaya inaad ka fogaato curcurka, ActionSleeve 2
Taxanaha Apple Watch 7 ee geesaha fidsan?
Xanta ku saabsan suurtagalnimada in Apple ay bilawdo Apple Watch oo dib loo naqshadeeyay oo leh wareegyo fidsan ayaa dib uga soo muuqanaya goobta
Apple waxay soo saartay Apple Music-ka cusub iyada oo aan lumin tayada Dolby Atmos, laakiin sideen u dhagaysan doonnaa?
Apple Music waxay bilaabeysaa adeeg muusig oo cusub iyadoo aan lumin tayada iyo Dolby Atmos. Waxaan kuu sharxeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Apple TV + waxaa loo saxiixay xili cayaareedkii labaad ee taxanaha 'Home Before Dark' taxanahan waxaa la sii dayn doonaa 11-ka bisha lixaad waxaana hada la heli karaa goos gooskiisa.
Apple wuxuu si sharaf leh u soo bandhigayaa laba xarig oo cusub oo loogu talagalay Apple Watch
Apple wuxuu si sharaf leh u soo bandhigayaa laba xarig oo cusub oo loogu talagalay Apple Watch. Midabada LGTBQI + wadajirka ah, iyo weji cusub oo u dhigma.
Amazon Music waxay raacdaa raadadka Apple waxayna bixisaa nooca HD iyada oo aan kharash dheeraad ah ku bixin
Amazon wuxuu noqdaa tartankii ugu horreeyay ee Apple Music inuu beddelo sicirkiisa isla markaana uu ku bixiyo nooc HD ah oo bilaash ah.
In kasta oo talooyinka CDC ee Maraykanka, Apple ay sii wadi doonto inay ku qasbeyso dhammaan macaamiisha iyo shaqaalaha inay xirtaan wejiga wajiga
Apple Music waxay diyaarinaysaa ku dhawaaqida toddobaadkan: HiFi iyo maqalka goobta
Apple ayaa qorsheyneysa inay soo bandhigto adeegdeeda muusikada cusub iyadoo aan luminin tayada, Apple Music HiFi, 24 saac gudahood, iyadoo aan wax qiimo ah lagu kordhin.
Filimkii ugu horreeyay ee '1971', Apple TV + docuseries cusub, ayaa hadda la heli karaa
Apple TV + waxay sii deysay filimkii ugu horreeyay ee taxanahiisa cusub '1971: Sannadka Muusigga Wax Walba Waa Baddelay' oo la heli karo 21-ka Maajo.
Sawirkii ugu horreeyay ee laga qaaday filimka Apple TV + Dilaaga Dayaxa Ubaxa, waxaa qoray Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio wuxuu muujinayaa sawirka filimka oo si gaar ah loogu sii deyn doono adeegga Apple TV +, Killers of the Flower Moon